काठमाडौं – एक्रेम इमामोग्लुको नाम टर्कीको राजनीतिमा गत मार्च महिनाको स्थानीय निर्वाचनअघि त्यति सुनिएको थिएन ।
तर टर्कीको निर्वाचन बोर्डले उनको विजयलाई खारेज गरेको भए पनि आफ्नो अडानमा दृढ रही उनी इस्तानबुलको मेयर बन्न पुगे । यो विजयपछि उनी राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआनका सबभन्दा ठूला चुनौती बन्न पुगेका छन् र टर्कीमा लोकतन्त्रका लागि अनपेक्षित नयाँ आशाको प्रतीक पनि बनेका छन् ।
निर्माण कम्पनीका पूर्वमालिक इमामोग्लु सन् २००९ मा स्थानीय राजनीतिमा आएका हुन् । उनी सन् २०१४ मा इस्तानबुलको मध्यमवर्गीय बेलिकदुजु जिल्लाको मेयर बनेका थिए । उनी विपक्षीहरूको गठबन्धन पिपुल्स रिपब्लिकन पार्टीका लागि मेयरका उम्मेदवार थिए । उनले सक्षम र खुला विचारधारा भएका प्रशासकका रूपमा आफ्ना मतदातामाझ लोकप्रिय बन्न सफल भए र त्यही आधारमा उनले धेरै प्रचारप्रसार नगरिकन निर्वाचन अभियान चलाएका थिए ।
आफ्ना भाषणहरूमा उनले शहरको गरीबीलाई हटाउन मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले टर्कीको राजनीतिमा भित्रिएको लोकरञ्जनवादी भाषालाई आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
यसै वर्षको आरम्भमा उनले अर्दोआनसँग इस्तानबुलको भविष्यका विषयमा छलफल गर्न भेटघाट गरेका थिए । यसले उनलाई मतदाताको सम्मान दिलाएको थियो ।
इमामोग्लुलाई टोलका बैठकहरूमा स्थानीय मुद्दाको छलफल गरिरहेको देखिन्थ्यो । उनको विरुद्ध उठेका सत्तारूढ जस्टिस यान्ड डिभेलोपमेन्ट पार्टीका उम्मेदवार बिनाली यिल्दिरिमलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले छायाँमा पार्दै विशाल र्‍यालीहरूमा राष्ट्रवादी नारा उचाल्ने गरेका थिए ।
यिल्दिरिमका पक्षमा सरकारी मिडियाहरू खुलेर लागेको भए पनि इमामोग्लुको निर्वाचन अभियानले शहरको कुर्दिश अल्पसंख्यकको मत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । ती अल्पसंख्यकहरू कुर्दिश राजनीतिकर्मीको पक्राउबाट असन्तुष्ट थिए । अनि एकेपी पार्टीका कामदार वर्गका मतदाताहरू २० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि र बढ्दो बेरोजगारीबाट पनि बेखुशी थिए । इमामोग्लुको सीएचपी पार्टीको विजयले टर्कीको सबभन्दा ठूलो शहर तथा अर्थतन्त्रको मुटुमा इस्लामी दलहरूको पकडलाई विगत २५ वर्षमा पहिलोपटक कमजोर बनाएको छ ।
आइतवार भएको पुनः निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एकेपीले कुर्दिश मतदाताहरूलाई फकाउन खोजेको थियो र इमामोग्लुका केही नीतिलाई आफ्नो भनी ब्रान्डिङ गर्न खोजेको थियो ।
तर एकेपीको प्रयास खेर गयो । इमामोग्लुले यस निर्वाचनलाई टर्किश लोकतन्त्रको भविष्यका लागि भएको लडाईंका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यिल्दिरिमले अघिल्लो चुनावभन्दा ८ देखि ९ प्रतिशत बढत लिएको ओपिनियन पोलहरूले देखाएका छन् ।
‘हामीले लामो समयसम्म गुमाएको सबै कुराको प्रतिनिधित्व इमामोग्लुले गर्छन्,’ नाम नबताउने एक नागरिक समाज अभियन्ताले भने । ‘उनी चतुर छन्, उनको ट्य्राक रेकर्ड राम्रो छ र आशा गरौं उनले सन् २०२३ मा अर्दोआनविरुद्ध उम्मेदवारी दिनेछन् ।
द गार्डियनमा प्रकाशित बेथान मककर्नानको रिपोर्ट
तपाईंले आफ्ना बच्चाको व्यवहारमा फरक पाउनुभएको छ भने सावधान ! काठमाडौँ । तपाईंले आफ्ना बच्चाको व्यवहारमा फरक पाउनुभएको छ ? छ भने सावधान हुनुहोस्, उनीहरूलाई बेग्लै खालको मानसिक समस्या पनि हुनसक्छ । त्यसलाई मनस्थिति परिवर्तन अर्थात् ‘मुड स्विङ&rsqu...
संवैधानिक आयोगमा ४० पद रिक्त, नियुक्ति कहिले ?
उपरथी र सहायक रथीमाथि सेनाको कारबाही
ट्रम्पमाथि महाभियोगको सुनुवाई शुरू